World News – Page2– GuGuGarGar
မျိုးတုံးပျောက် ကွယ်လု နီးပါးဖြစ်နေ သည့် သင်းခွေချပ် သည် တရုတ်နိုင်ငံ တစ်ဝန်းတွင် နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမှု ကို ဖြစ်ပေါ်စေ သည့် ကွင်းဆက်ဖြစ်နိုင် သည် ဟု တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်များ က ဖေဖော်ဝါရီ (၇) ရက် တွင် ပြောကြား သည် ။ ပေကျင်း ၊
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ( ၃ ) ယောက် ထပ်တွေ့ တယ် ။ အဲ့ဒီ ( ၃ ) ယောက် ရဲ့ ကူးစက်မှုက တရုတ်ပြည် သွားခဲ့ တာလည်း မပါဘူး ။ အရင်ကူးစက် ခဲ့တဲ့ လူနာတွေနဲ့လည်း မပတ်သတ်ဘူး ။ သူတို့ ကူးစက်တာက အသစ်တွေ….အဲ့ဒီ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကို ကမ္ဘာတဝန်းရနိုင်ဖို့ အစောဆုံးအချိန်တစ်ခုအနေ နဲ့ ၂၀၂၁ အစပိုင်းလောက်မှ ဖြစ်နိုင်မည်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေး ကို ကမ္ဘာတဝန်း ရနိုင်ဖို့ဟာ အစောဆုံး အနေ နဲ့ နောင်နှစ် အစပိုင်းလောက် မှ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ဗြိတိန်သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ဦး က ဖေဖော်ဝါရီလ (၇) ရက် မှာ ပြောလိုက် ပါ တယ် ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့ ဗြိတိန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အသည်းအသန်
အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ မဟာဗျူဟာကျတဲ့ ရေနံကို တက္ကဆက် နဲ့ လူဝီစီးယားနားပြည်နယ်တွေက ဆားလိုဏ်ဂူတွေအောက်မှာ သိုလှောင်ထားတာဟာ စည်သန်းပေါင်း ၆၄၀ ကျော်မက ရှိပါတယ် ။ ခုလို မဟာဗျူဟာ ရေနံသိုက်တွေ အမေရိကန်နိုင်ငံ သိုလှောင်ထားလာတာဟာ (၁၉၇၀) ခုနှစ်တွေက စတင် ပါတယ် ။နိုင်ငံတကာ စွမ်းအင် အေဂျင်စီ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းဟာ ရက် ၉၀
ကမ္ဘာအနှံ့အပြား မှာ ပြည်ပရောက် တရုတ်တွေဟာ လမ်းပေါ် မှာ တွေ့ရင် ထွီ ဆို တံတွေး ထွေးခံရတယ် .. အနားလာထိုင်ရင် ဘေးကလူ ရွှေ့သွားခံရတယ် …corona virus လို့ အော် ပြီး စခံရတယ် .. ကျောင်း မှာ တရုတ် ကလေးတွေ ကို အခြားလူတွေ
၈. ၂. ၂၀ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၈.၃၀ နာရီအထိ ရရှိသော စာရင်းများအရ နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေ ၂၉ ခုတွင် ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရသူပေါင်း (၃၄၈၇၈) ဦး ၌ (၁၇.၅) ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရောဂါ အသည်းအသန် ခံစားနေရပြီး ( ၇၂၄ ) ဦးသေဆုံးကာ
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားနေသည့် ဒေသများ တွင် တိရစ္ဆာန်များ မှ တစ်ဆင့် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကူးစက်စေနိုင်သည် ဆိုသည့် သတင်းများကြောင့် အိမ်ရှင်များသည် သူတို့ မွေးထားသည့် အိမ်မွေးတိစ္ဆာန် များဖြစ်သော ခွေးနှင့်ကြောင်များကို ကိုယ်တိုင် သတ်ကာ သူတို့ ၏ တိုက်ခန်းပြတင်း တံခါး မှ ပစ်ချခဲ့မှုများ ရှိခဲ့သ ည် ။
WK | February 7, 2020
အိန္ဒိယနိုင်ငံက အသက် ( ၇ ) နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးဟာ အလွန်တရာ မှ ရှားပါးလွန်းလှတဲ့ ထူးဆန်းသော အရေပြားသန္ဓေပြောင်းလဲမှုရောဂါ တစ်ခုကြောင့် လူစင်စစ်ကနေ ကျောက်တုံး ကျောက်ဆိုင် ဘဝ ကို တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာနေ ပါ တယ် ။ သူမရဲ့ အရေပြားတွေ မှာ တက်နေတဲ့ ထူထဲလှတဲ့
တရုတ်နိုင်ငံ မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ( ၆၃၆ ) ဦး ရှိလာကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ကာ ပိုးကူးစက်လူနာ ( ၃၀၀၀၀ ) ကျော်ခဲ့ပြီ လို့အစိုးရက ယနေ့ သောကြာနေ့ ( ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ) မှာ
Diamond Princess ဂျပန်ဇိမ်ခံအပျော်စီး သင်္ဘောကြီးပေါ်တွင် ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ (၆၁) ဦး ထိ ထပ်မံတွေ့ရှိ
Feb 7, 2020 , တိုကျို ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ( ၇ ) ဂျပန်နိုင်ငံ ယိုကိုဟားမားမြို့ဆီ ဦးတည်သွားနေတဲ့ ဇိမ်ခံ အပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စီးပေါ် မှာ စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ ဟောင်ကောင်သားတစ်ယောက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အသစ် ကူးစက်ခံရ အပြီးမှာ သင်္ဘောပေါ်ရှိ လူအားလုံး ကို ဆင်းခွင့်မပေးတော့ပဲ အဲဒီသင်္ဘော တစ်စီးလုံးကို